Hyundai Ioniq5ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အတွင်းခန်း ပုံရိပ်များ ပေါက်ကြားလာ ! – MyMedia Myanmar
Hyundai Ioniq5ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အတွင်းခန်း ပုံရိပ်များ ပေါက်ကြားလာ !
လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ် လောက်တုန်းကပဲ Hyundai ဟာ သူတို့ရဲ့ Ioniq EV Sub-Brand ထဲက ထုတ်လုပ်မယ့် လျှပ်စစ်ကား အသစ် ၃ မျိုးထဲမှာ ပထမဆုံး အမျိုးအစား အဖြစ် Ioniq5ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဆိုပါ Ioniq5တော့ Hyundai 45 Concept ကို Inspire ယူပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ Retro-Style Crossover တစ်စီး အဖြစ် ပွဲထွက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်း ခဲ့ကြပြီး Ioniq6အမျိုး အစား ကတော့ Sedan ပုံစံနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိနေတာပါ။ အမြင့်ဆုံး Range ကတော့ Ioniq7ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး တကယ်ကို အရွယ် အစား ကြီးမားတဲ့ လျှပ်စစ် SUV ကား တစ်စီးလည်း ဖြစ်လာမှာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ Ioniq5ကို အကြိုမြင်တွေ့ရမယ့် Spy Shots အများ အပြား ပေါက်ကြားလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး Concept မှာတုန်းက မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Retro-Style ကို အများကြီး ယူဆောင်လာတယ် ဆိုတာ သေချာ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားရဲ့ အတွင်းခန်းနဲ့ ပက်သက် လို့ကတော့ အတော်လေးကို ဖုံးကွယ်လျှို့ဝှက်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
အခုဆိုရင်တော့ Korean Car Blog ကနေ တစ်ဆင့်ရရှိပြီး AutoPost က ဖော်ပြထားချက် အရ Ioniq5ရဲ့ ဖုံးကွယ်မထားတဲ့ အတွင်း ခန်း Cabin တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မြင်တွေ့လာရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံ မကောင်းတာ တစ်ခုကတော့ အဆိုပါ ပုံရိပ်တွေကို ကားရဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း ကနေသာ ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြင်တွေ့ ရသလောက်တော့ Ioniq5ရဲ့ အတွင်းခန်းဟာ Concept မှာ မြင်ခဲ့ရတဲ့ Layout အတိုင်း ဆက်ရှိလာနိုင်တာ ဖြစ်ပြီး သေချာတာကတော့ ကြီးမားတဲ့ Screen နဲ့ အတူ Dashboard တစ်ခုလုံးကိုပါ အဆိုပါ Screen က ဖုံးအုပ်လာနိုင်တာကြောင့် Lounge-Like Cabin ကို မြင်တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ထုတ်လုပ် မယ့် Model မှာ တော့ Mercedes Benz Models တွေဖြစ်ကြတဲ့ A-Class Sedan လိုမျိုး ကားရဲ့ Dashboard အပိုင်းမှာ Dual-Screen Layout အကျယ်ကြီးက အဓိကကျတဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ဖြစ်လာမှာပါ။ ကံမကောင်းတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အတွင်းခန်းကို အခြား ရှုထောင့်တွေကနေပါ မရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ သေးတာ ကြောင့် အခု Production Model အနေနဲ့ တကယ်ပဲ Concept မှာ မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်း ရှင်းလင်း သပ်ရပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းအသွင် ဖြစ်လာ မှာလား ဆိုတာကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် လည်း အခု ထွက် ပေါ်ထားတဲ့ အချက်အလက် တစ်ချို့ကြောင့် အဆိုပါ ကားအသစ်ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်တွေဟာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ အဖြစ် ဆက်ရှိနေ တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဥရောပ ရဲ့ ပထမဆုံး Edition Trim အနေနဲ့ ကတော့ 58 kWh ဘက်ထရီကို အသုံး ပြုလာနိုင်ပြီး Range ပမာဏ ကလည်း WLTP အရ 280 မိုင် အထိ ရှိလာနိုင်ကာ Dual-Motor Setup အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ 308 hp အထိ မောင်းနှင်လာနိုင်ကာ အချိန် အားဖြင့် ၅.၂ စက္ကန့်လောက် အတွင်းမှာတင် ၀ ကနေ ၆၂ မိုင် နှုန်းအထိအရှိန်တင် စွမ်းဆောင် နိုင်မှာပါ။ ပိုကြီးတဲ့ 73 kWh ဘက်ထရီ ကိုအခြား သော Trim တွေမှာ နောက်ပိုင်းကျရင် ဆက်လက်တပ်ဆင်လာနိုင်ပြီး တပ်ဆင်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ WLTP Range 342 မိုင် အထိကို ရှိလာမှာ ဖြစ်ကာ အမေရိကရဲ့ EPA Cycle အရ တော့ 300 Mile Range လောက် အထိကို ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိက ဈေး ကွက် ထဲမှာတော့ အဆိုပါ ကားအသစ်တွေ ရောင်းချမှုကို လာမယ့် ဇူလိုင် လထဲမှာပဲ စတင် လာနိုင်ပြီး အခုနှစ် အစောပိုင်း လောက် မှာပဲ ကားကိုလည်း ပွဲထုတ်လာနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Hyundai အနေနဲ့ ကတော့ အပတ်စဉ် Social Campaign တွေ ပြုလုပ်ကာ စိတ်ဝင်စားမယ့် အသေးစိတ် အချက်အလက် တစ်ချို့ကို ချပြလေ့ရှိတာကြောင့် Ioniq5ရဲ့ အကြောင်းကို မကြာခင် ထပ်မံသိရှိရတော့ မှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
The post Hyundai Ioniq5ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အတွင်းခန်း ပုံရိပ်များ ပေါက်ကြားလာ ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-14T20:01:41+06:30January 14th, 2021|MYCARS MYANMAR|